रेनशाले हिरोइन पाइन्, धिरजसँग जसिताको जोडी ! « Ramailo छ
रेनशाले हिरोइन पाइन्, धिरजसँग जसिताको जोडी !
‘इन्टु मिन्टु लण्डन’मा पछि रेनशा वान्तवा राई दोश्रो फिल्म ‘आइएम ट्वान्टी वन’ निर्देशन गर्दैछिन् । आइकोर फिल्मसले बनाउने फिल्ममा नायक धिरज मगर मात्रै फाइनल भएका छन् । रेनशा हिरोइनको खोजीमा छिन् ।
तर रेनशाले हिरोइन पाइसकेको संकेत देखिएको छ । ‘आइएम ट्वान्टी वन’मा नायिका जसिता गुरुङ्गसँग मिटिङ भैरहेको बुझ्नमा आएको छ । केही दिन अगाडी मात्रै रेनशा र जसिताले समुहमा इन्स्टा स्टोरी सेयर गरेका थिए । यसबाट पनि ‘आइएम ट्वान्टी वन’का लागि जसिता रोजाइमा पर्न सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । धिरज, शारुक र रेनशासँग गरिएको रमाइलो कुराकानी हेर्नुस् :
‘लिलिबिली’ रिलिज पछि जसिता प्रदीप खड्कासँग ‘लभ स्टेशन’ खेल्दैछिन् । पहिलो फिल्मबाट जसिता धेरै निर्माता तथा निर्देशकको नजरमा परेकी हुन् । यतिबेला रेनशा धिरजसँग जसिताको जोडी बनाउन लागि परेकी छन् । के धिरज र जसिताको जोडी ‘आइएम ट्वान्टी वन’मा पक्का होला त ?